On Homosexuality | Atta Kyaw & Lettwebaw Books
from → Discussion, Homosexuality
The Origin of Spilling Over Other People’s Pockets →
Truth permalink	16 August 2011 12:53 pm	Men population is less than women in Myanmar. I opposite it!! if they want to marry man they must marry to woman too.
Reply	lettwebaw permalink*	16 August 2011 4:11 pm	Facebook ပေါ်က ဆွေးနွေးချက်များ
Atta Kyaw: In my view, the majority of Thai people are very tolerant of anything, and hence they do not see it asa“problem,” but as an “unavoidable nature.” I believe their development is far ahead of us just because of their great tolerance towards contrary points of view. On the other hand, we, Shwes, are prone to kick upatremendous fuss about EVERYTHING !!! :(
Reply	Dr. Myat Phyo Kyaw permalink	18 August 2011 9:53 pm	အပေါ်က comment ကို နည်းနည်းလေး ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်…..အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါ… HIV ဟာ MSM တွေကြောင့်လို့ တထစ်ချပြော လို့ မရပါဘူး…MSM တွေကြားမှာ အဖြစ်များတယ်… High Risk ဆိုတာ မှန်ပါတယ်… လိင်တူ လုံးဝစိတ်မ၀င် စား ပါဘူး ဆိုတဲ့သူ တွေမှာ လည်း ဒုနဲ့ဒေး ပါ…အဓိက က မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ကို နားလည်သဘောပေါက်ကြဖို့ပါ…ကျုံးဘေးက ဆိုတာကိုလဲ.. စဉ်းစားပေးပါ…အခြောက်တစ်ယောက်.. အပွင့်ဆိုပါစို့.. မိန်းမ တစ်ယောက်လို ၀တ်စားပြီး သူ့လမ်းသူသွားနေတယ်.. အဲ့ဒါ ကို ဘယ်သူတွေဝိုင်းနောက်မလဲ…ယောက်ျားစစ်စစ်ဆိုတဲ့သူတွေပဲ ၀ိုင်းနော်ကျမယ်.. ယေဘူယျသဘောက်ုပြောတာနော်… ဆိုလိုတာ က .. မီးများမီးနိုင် ရေများရေနိုင်လို့ပဲ ထင်ပါတယ်….
Reply	lettwebaw permalink*	19 August 2011 2:27 am	ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမြတ်ဖြိုးကျော်။
david permalink	7 March 2013 10:10 am	ဟုတ်ပါတယ်…လူဆိုတာကိုယ်.အကြိုက်နဲံကိုယ်ပါ..ကျွန်တောလဲလိင်တူစိတ်ဝင်စားသူတစ်ယောက်ပါ…အခြောက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လိင်တူချင်းကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်…daviddavid079@gmail.comကကျွန်တော် ရဲံအီးမေးလ်လိပ်စာပါ….။
titan permalink	17 August 2011 12:04 pm	အခြောက်တွေကို လူလို သူလို မဆက်ဆံတာကိုတော့ လက်မခံပါဘူး…
Reply	Gipsy Bird permalink	24 August 2011 2:46 pm	ဆရာခင်ဗျ ခုတလောပြောနေကျတာလေးကတော့ ယောကျာ်းလေးတွေက မိန်းကလေးတွေ အလှပိုပြင်လာကြတယ်ဆိုတာပါပဲ…. ကျွန်တော် လေ့လာကြည့်တော့ ဟုတ်သလောက်ကို ဖြစ်နေပါတယ် ယောကျာ်းလေးတွေဟာ အရင်ကထက် ပိုပြီး အလှပြင်လာကြတာကို တွေ့ပါတယ်…… အဓိက ကျွန်တော် ဆွေးနွေးချင်တာက အဲ့ဒီလို ယောကျာ်းလေးတွေ အလှပိုပြင်လာကြတာဟာ နောက်ပိုင်းကြာလာရင် မိန်းမရှာတွေ များလာမယ်လို့ ကြားပါတယ်….အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာက ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အယူဆတဲ့ အရင်က အခြောက် အဲ့ဒီလောက် ဘယ်မှာပေါလဲတဲ့…… နောက်ပိုင်း ဒီထက် ပိုပေါနေဦးမယ်တဲ့ အဲ့ဒါဟာ အရင်ဘ၀က သူများ သားမယားတွေကို စော်ကားခဲ့လို့ ဒီဘ၀မှာ ပြန်ခံရတာလို့လဲ ကြားမိပါတယ်….. ဒီလို အဖြစ်ပျက်တွေက တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ များလာတာလဲ ကြားသိရပါတယ်…..ဆရာ့ရဲ့ အမြင်လေးကို သိပါရစေ။။
Reply	lettwebaw permalink*	24 August 2011 5:31 pm	မေးတဲ့နေရာ မှားနေတယ် ထင်ပါတယ်။ လောကီကိစ္စတွေကို ဘာသာရေးနဲ့ မေးရမယ့် နေရာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ :(
လောကမှာ သူများ မယားကို ကျူးလွန်တဲ့ ကြာကူလီထက်စာရင် သူများလင်ကို ခိုးတဲ့ မယားငယ်တွေ၊ အမြှောင်မယားတွေ၊ တိတ်တိတ်ပုန်းမိန်းမတွေက ပိုမများဘူးလားဗျာ။ ခင်ဗျား ကြားဖူးတဲ့ သီအိုရီအရဆိုရင် ယောက်ျားလျာတွေပဲ ပိုပေါမနေသင့်ဘူးလား :(
ယောက်ျားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် မျက်နှာမှာ အမာရွတ်တွေ ဖြစ်လာအောင် ဓားနဲ့ မွှန်းပေးရမယ်၊ မျက်နှာ မသစ်၊ သွားမတိုက်ရဘူး၊ ၀က်ခြံဗရပျစ်နဲ့ နေရမယ်လို့တော့ ကြားဖူးပေါင်ဗျာ။ ယောက်ျားလည်း အသားနဲ့ အရေနဲ့ပဲ။ လှချင်မှာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ပဲ မိန်းမလျာ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကြီးလည်း နိပ်ဘူးဗျ။ ဘယ်က အတွေးအခေါ်တွေ တင်သွင်းပြီး လာမေးနေမှန်း သိပေါင်ဗျာ။ အလွန် စိတ်လေမိပါရဲ့။ :(
Reply	Gipsy Bird permalink	26 August 2011 7:01 pm	အမှန်ကိုသိခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ
oscar permalink	5 September 2012 1:04 am	ဆရာ………..မြန်မာ နိုင်ငံက မိဘတွေက အခြောက်စိတ်ကို ပြင်လို.ရတယ်လို. ယူဆထားကြပါတယ်…..ပြင်လို.မရဘူးဆိုတာကို ဘယ်လို ရှင်းပြရမလည်း ဆရာ……
Su Yie Kyaw permalink	26 August 2011 10:12 am	တစ်ချို့ပြောနေတဲ့ ဆွဲဆောင်ဖျားယောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး နဲနဲဆွေးနွေးချင်တာလေးကို ရေးလိုက်ရပါတယ် အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်။ တကယ်တော့ လိင်တူချင်းဆက်ဆံရေးမှာမှ မဟုတ်ပါဘူး ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးမှာမဆို ဆွဲဆောင်ဖျားယောင်းမှုတွေရှိနေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်က အသိပညာနဲ့ ဗဟုသုတကြွယ်ဝပြီး စာဖတ်အားရှိထားမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူ့ဘယ်သူ ဘယ်နေရာကမှ ဆွဲဆောင်ဖျားယောင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။ မိမိအသိဥာဏ်နဲ့ချိန်ထိုးပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပါ။
Reply	Kyaw Kyaw Khine permalink	8 September 2011 12:43 am	ကျနော် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် (၁၂-၁၃) လောက်တုန်းက အခြောက်ရဲ့ အခွင့်ကောင်းယူမှုကို ခံရဖူးပါတယ်။ တကယ်တော့ လူပျိုတောင် မဖြစ်သေးတဲ့ အရွယ်ပါ။ ကျနော် တော်တော်ကို စိတ်လေသွားတယ်။ ဒါကြောင့် အခြောက်ဆို အခုအချိန်ထိ ရွံနေမိတယ်။ ၁၆ နှစ် (၉ တန်းလောက်မှာ) လည်း အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ သူ့ဆန္ဒပြေပျောက်ဖို့အတွက် (ယောင်္ကျားလို) ပြုကျင့်ဖို့ ကြံတာကို ခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ဘယ်လိုစိတ်မျိုးရှိသူဖြစ်ဖြစ် နည်းမှန်လမ်းမှန်း မဟုတ်တဲ့နည်းနဲ့ ကိုယ့်အာသာဆန္ဒကို ဖြေဖျောက်ဖို့ ကြိုးစားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ မကောင်းတဲ့ အပြုအမူဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော်ကြုံတွေ့ရတာကို တိုက်ဆိုင်လို့ မျှဝေတာပါ။ ပွင့်လင်းခွင့် ပေးသင့်/မပေးသင့်ဆိုတာတော့ ကျနော် ဥာဏ်မမှီလို့ မဆွေးနွေးချင်တော့ပါ။
Reply	Wai Htute permalink	17 November 2011 8:59 pm	ကိုယ်လည်းကြုံ ဘူးပါတယ် ဒါပေမယ့်အားမနာတတ်တော့ ခါးမပါခဲ့ဘူးဗျ
Reply	အချစ်ရူး permalink	4 May 2012 4:40 am	စိတ်မကောင်းပါဘူး…အဲလိုအဖြစ်မျိုးကနေ လူတိုင်းကင်းဝေးနိုင်ပါစေ
Reply	Myat Thu San permalink	29 September 2011 12:30 pm	အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ topic လေးပါပဲ။ ကျွန်တော့်အမြင်ကိုလည်း နည်းနည်းလောက် ၀င်ဆွေးနွေးပါရစေ။ ကျွန်တော့်အမြင်သက်သက်မျှသာဖြစ်တဲ့အတွက် အမှန် ဖြစ်တယ်လို့လည်း မခံယူမိပါဘူး။ ကျွန်တော်ဟာ သာမာန် စာဖတ်သူမျှသာဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်ပါးလည်း မ၀ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖတ်ဖူး၊ ကြားဖူး၊ မြင်ဖူးတဲ့အရာတွေကိုတော့ ဥာဏ် မီသလောက် လိုက်စဉ်းစားကြည့်မိ တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် မှားတာ၊ အဆင်မပြေတာတွေ ပါရင်လည်း သည်းခံပေး ဖို့ မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်။
Reply	hanlintunn permalink	29 September 2011 2:43 pm	သင့်တင့်မျှတပါ၏။ ကိုယ့်အချင်းချင်းမို့လို့ လာထောက်ခံဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး…
Reply	wynn ko permalink	26 March 2012 1:39 pm	အတော်လေးကို ပြည့်စုံသလောက်ရှိတဲ့ comment လေးပါဗျား။ လေးစားပါတယ်။
Reply	စိုးမင်းရှိန် permalink	30 March 2012 11:24 am	ကိုမြတ်သူစံရေ ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်အခါအခွင့်သင့်ရင်ဆွေးနွေးချင်တယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားရဲ့အယူအဆလေးတွေကိုလေးစားလို့။ ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ လှိက်လှဲစွာကြိုဆိုလျက်ပါ။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ အင်တာနက်ကို g talk လောက်သာသုံးရကောင်းမှန်းသိတဲ့သူတွေကြားက ခင်ဗျားတို့လို အတွေးအခေါ်ကောင်းတဲ့သူလေးတွေတွေ့ရတော့ ၀မ်းသာတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့်ကိုဆက်သွယ်ချင်ရင်တော့ inforwynnko@gmail.com ဆီဆက်သွယ်လိုက်ပါဗျား။
Reply	Myat Thu San permalink	4 April 2012 7:25 pm	ကျွန်တော့်အမြင်ကို လက်ခံပေးကြလို့ကျေးဇူးပါ။ ကျွန်တော်ရေးတင်စက ရေးသာရေးလိုက်ရတယ်။ သူများတွေအတွက် စာဆန်နေမလားလို့ မ၀ံ့မရဲဖြစ်မိတာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အတွေးစရသွားရင်လဲ အမြတ်ပဲ ဆိုပြီး တင်ဖြစ်လိုက်တာပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဥာဏ် တစ်ထွာတစ်မိုက်နဲ့ ရေးထားတဲ့အပေါ် ဆရာရဲ့ အမြင်ကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။ ဆရာ့မှာ ဗဟုသုတဘဏ်တိုက်ရော၊ အတွေ့အကြုံပါ ပြည့်စုံလှတဲ့အတွက် ဆရာရဲ့အမြင်ကိုလည်း တလေးတစားနဲ့ သိချင်မိပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါ ခင်ဗျာ။
Reply	lettwebaw permalink*	31 May 2012 5:53 pm	(၁) ဇာတ်သွင်းလို့ မရဘူးလို့ ကျွန်တော်ကတော့ အခိုင်အမာ ယုံကြည်ပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်တွေမှာ တချို့ လူချောချော နုနုတွေ ခမျာ နှစ်ကြီးတွေက အနိုင်ကျင့်ပြီး အဓမ္မပြုကျင့်ကြတဲ့အတွက် ပြစ်ဒဏ်က မလွတ်မချင်း ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြသူတွေ ရှိပါတယ်။ ပြစ်ဒဏ်စေ့လို့ အပြင် ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ သူတို့ဟာ လိင်ကွဲကို တပ်မက်သူအဖြစ်နဲ့သာ နေပြီး အဲဒီ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကို လုံးဝ ပြန်မရောက်သူတွေလည်း တစ်ပုံတစ်ပင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ သုတေသန အားနည်းလို့ ကိန်းဂဏန်းနဲ့ မပြောနိုင်တာပဲ ရှိပါတယ်။
(၃) စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းမှုတွေအကြောင်း ပြောတာ (၀ါ) ဆုံးမစာတွေ ရေးတာ ကျွန်တော် ၀ါသနာ မပါဘူးခင်ဗျ။ ယုံလည်း မယုံကြည်ပါဘူး။ ဆုံးမစာတွေက သမိုင်းအစကတည်းက ရှိနေခဲ့တာပဲလေ။ ဆုံးမစာတွေသာ ထိရောက်ရိုးမှန်ရင် သည်လောကမှာ စစ်ပွဲတွေလည်း ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး၊ အရက်ဆိုင်တွေ၊ ဇိမ်ခန်းတွေ၊ အနှိပ်ခန်းတွေ၊ ကာရာအိုကေခန်းတွေ၊ ဘိန်းပင်တွေ၊ ဘိန်းချက်စက်ရုံတွေ၊ ဘိန်းဖြူတွေလည်း ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဗေဒင်ဆရာများ ခမျာမှာလည်း လင်ပူမိနေတဲ့ ဖောက်သည်အများစု ပျောက်ဆုံးသွားတော့မှာမို့ ထမင်းတွေတောင် ငတ်ကုန်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်သားကို ဆုံးမတာ သန်တဲ့သူတွေ ဆုံးမကြပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အရှိတရားကို အရှိတရား အတိုင်း လက်ခံတယ်။ ဘုရားရှင်တောင်မှ ချွတ်လို့ ရမယ့်သူကိုမှ ချေချွတ်ပေးတော်မူခဲ့တာ အထင်အရှားပဲလေ။ လက်ချောင်းတွေ အတိုအရှည် မညီသလို လူတွေလည်း အမျိုးမျိုး ရှိနေတာကို အတည့်အတိုင်းပဲ မြင်မိပါတယ်။ အဲတော့ ဆုံးမတာထက် လူလူချင်း ရိုင်းပင်းတတ်တဲ့ စိတ်ကလေးတွေ ပွားများလာအောင်၊ ဘေးဖြစ်မယ့် အနေအထိုင်တွေ လျော့ပါးသွားအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး လျှောက်လဲနေမိတာပါပဲ။ “လျှောက်လဲ” (advocate) နော်၊ ဆုံးမတာ (preach) မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။
Reply	winhtein permalink	8 November 2012 1:43 am	Very very good .fully wisdom .thinkalot.
Reply	thawtar permalink	9 October 2011 12:36 pm	ဆရာရေ …ဒီစာကို ဖေ့ဘွက်မှာဖတ်ဖူးထဲက ဆွေးနွေးချင်နေပေမယ့် မရေးမိခဲ့ပါ။အခုဆရာဆိုက်မှာ ထပ်ဖတ်ပြီး ကောမန့်တွေကိုပါစိတ်ဝင်စားစွာဖတ်မိပါတယ်။နည်းနည်းပြောချင်လာပါတယ်။ သမီးလည်း ငယ်ငယ်က အခြောက်တွေဆို နှိမ်ချင်။စချင်တတ်တဲ့လူပါ။ အခု ခင်တဲ့အကို၂ယောက်ကို တွေ့မိမှ သဘောထားပြောင်းလာမိပါတယ်။ သမီးတို့က လက်ရှိဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေပါ။
Reply	Ko Htun permalink	31 May 2012 4:40 pm	I totally agree with you Thawtar!!
Reply	brown tun permalink	13 August 2013 9:24 pm	good..
မောင်ထွန်း permalink	20 December 2011 10:06 pm	ဆေးသိပ္ပံ ဗဟုသုတ အတော်လေးရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
Reply	Avril permalink	2 January 2012 5:20 pm	မသိလို့တခုလောက်မေးပါရစေ…သူငယ်ချင်း ယောကျာ်းလျှာလေးတယောက်နဲ့ နောက်သူငယ်ချင်းမလေးတယောက် ချစ်ကြိုက်နေကြပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ယောက်ျားလျှာလေးကို ကောင်မလေးက ယောက်ျားလေးတယောက်လို ချစ်တာပါ.. ယောက်ျားလျှာလေးကလဲ ကောင်မလေးကို သာမန်ကောင်လေးတယောက်က ကောင်မလေးတယောက်အပေါ် ချစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ချစ်တာပါ..ဒါမျိုးကိုhomosexuality လို့ ပြောလို့ ရပါသလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က တယောက်နဲ့တယောက် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ပုံစံမျိုးနဲ့ ချစ်ကြတာဆိုတော့လေ.. ဆရာ့အမြင်လေးကို သိချင်လို့ပါ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. :)
Reply	lettwebaw permalink*	6 January 2012 7:51 am	Homosexuality ဆိုတဲ့ စကားလုံးမှာ sex ပါနေတဲ့အတွက် လိင်မှုကိစ္စကိုပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားကြစမြဲ ဖြစ်ပေမယ့် sexuality ဆိုတာ လိင်စိတ်ကို ဆိုလိုပါတယ်။ လိင်စိတ်ဆိုရာမှာလည်း လိင်ကိစ္စ အပြင် ချစ်ခင်နှစ်သက်လိုလားမှု၊ ကိုယ့်ကိုလည်း ချစ်ခင်နှစ်သက်လိုလားတာ ခံယူလိုမှု၊ ယုယကြင်နာမှု၊ ယုယကြင်နာတာ ခံယူလိုမှု၊ အားကိုးအားထား/အဖော်သဟဲ ပြုလိုမှုများလည်း ပါဝင်နေပြန်သေးတာမို့ လိင်တူချင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အဲသလို ချစ်ခင်ခြင်းကို homosexuality လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ လိင်ကိစ္စမပါဘဲ လိင်တူချင်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကိလေသာစိတ်နဲ့ ချစ်ခင်စွဲလန်းတာကိုလည်း homosexual လို့ပဲ ခေါ်ပါတယ်လို့ ဆိုလိုရင်းပါ။
Reply	Timothy permalink	12 January 2014 1:09 am	Saya atta kyaw!
lettwebaw permalink*	12 January 2014 10:54 am	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာကြိုက်မှန်း သိနေမှတော့ အဲဒါကို ပြင်ဖို့ မကြိုးစားစေချင်တော့ပါဘူး။ ပြင်လို့လည်း မရလို့ပါ။ လိင်တူ/လိင်ကွဲ ကြိုက်ခြင်းဟာ ဘယ်သန်နဲ့ ညာသန်လိုပါပဲ။ မွေးရာပါ သန်တာမျိုးမို့ ပြင်လို့ မရဘူးလို့ပဲ ယတိပြတ်ပြောပါရစေ။ သည်ကိစ္စကို မနှစ်သက်ရင် လုပ်စရာ တစ်နည်းပဲ ရှိပါတယ်။ လူဝတ်ကြောင်ကို လုံးဝ စွန့်လွှတ်ပြီး ရဟန်းဝတ်ကာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကို အားထုတ်ရတော့မှာပါ။ ရှစ်ပါး သီလကို လုံအောင် ထိန်း၊ ၀ိနည်းကို လေးစားလိုက်နာမယ်ဆိုရင် လိင်မှုကိစ္စနဲ့ ကင်းဝေးနေပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် သံဃာတော်တွေများပြားတဲ့ ကျောင်းမျိုးမှာ သီတင်းမသုံးဘဲ တောရကျောင်းလို ကျောင်းထိုင်အိုကြီးတွေ တစ်ပါး၊ နှစ်ပါးမျှသာ ရှိတဲ့ ကျောင်းမှာ အားထုတ်သွားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ တစ်ဘ၀လုံးကိစ္စပါ။ အခုခဏ ပြေလည်မှု ရှာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လိင်တူချင်း တပ်မက်မှုဆိုတာလည်း တစ်ဘ၀လုံး အသက်ရှင်နေသမျှ ကိုယ်ထဲမှာ စွဲနေမယ့် အရာပါ။ အဲဒါကို မရှက် မကြောက်စေချင်ပါဘူး။ ပြောင်ပြောင်ပေါ့။ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ကြိုက်တာပဲပေါ့။ မကြိုက်တာ မကြိုက်တာပဲပေါ့။ အဲသလိုသာ ဖြစ်သင့်ပါလိမ့်မယ်။ တွေးဆ ဆင်ခြင်ကြည့်နိုင်ပါစေ
Timothy permalink	12 January 2014 1:15 am	Just reply me in Myanmar saya. I have problem to type in Myanmar . That’s why I just typed my question in English. Actually my english is not good. I worry I don’t understand if you reply me in English. Thanks.
khinnyunt permalink	7 January 2012 10:10 am	မြတ်သူစံ ဟန်လင်းထွန်းပြောတာတွေအရမ်းမှန်တာပေါ့ အတွေးအခေါ်တွေအလွန်ကောင်းတယ်ဗျာ
Reply	wynn ko permalink	26 March 2012 1:49 pm	ဒီလိုပြောတာလဲ သိပ်သဘာဝမကျသလိုထင်မိပါတယ်။ မြတ်သူစံပြောတာတွေကို ကျွန်တော်လည်းအရမ်း သဘောကျပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စအပေါ်မှာ ဆရာအတ္တကျော်ပြောတာကို လက်မခံနိုင်ဦးတော့။ ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်မှာ ဆရာအတ္တကျော်တွေးခေါ်ပြတာလေးတွေက လက်ခံနိုင်စရာများပါတယ်။ ပုထုဇဉ်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြီးပြည့်စုံမှုတော့ ဘယ်ရှိနိုင်မလဲ။ ကိုယ်နဲ့အတွေးအခေါ်မတူတာလေးတစ်ခုကြောင့် ဆရာမခေါ်ထိုက်ဘူးလို့ပြောတာက ရိုင်းစိုင်းတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
Reply	soe moe permalink	21 April 2012 1:55 pm	နှစ်ယောက်လုံး ပြောသွားတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကိုးကွယ်ချင်နေ မစော်ကားနဲ့ဆိုတဲ့ ဆိုိရိုးစကားလေး ရှိတာကြောင့် တဖက်လူကို ဒီလိုတော့ မပြောသင့်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဆရာ့ကို ဒီလိုပြောတာကိုတော့ ရိုင်းစိုင်းတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
Reply	ဆောင်းနှင်း permalink	2 May 2012 3:08 pm	လိင်တူဆက်ဆံတာကို လက်မခံနိူင်ဘူး မှားတယ်လို့ထင်မြင်ရင် အနောက်တိုင်း တွေမှာ လိင်တူဆက်ဆံသူတွေ ကို တရားဝင် မင်္ဂလာဆောင်ခွင့်ပြုနေတဲ့ အကြီးအကဲတွေကို ဘယ်လိုပြောမလဲ? အခုဆို နိူင်ငံတော်တော် များများက လက်ခံနေပြီ….. ဒါကိုရော ဘယ်လိုပြောမလဲ… လူ ဆိုတာ ဘယ်လိုပုံဆံ နေတာထက် စိတ်ထားကောင်းဖို့က ဓိကပါ … သူဘယ်လိုနေနေ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်နေတာမှ မဟုတ်တာ……
Reply	oscar permalink	5 September 2012 12:54 am	လူရယ်လို. ဖြစ်လာရင် စာရိတ စိတ်ရင်းကောင်းဖို.၊ အရည်အချင်းရှိဖို.က အရေးကြီးဆုံးလို. ထင်မိပါတယ်။
Reply	Tohon permalink	11 May 2012 7:11 am	• ဆရာ့ရဲ့ post ကို စတင်ကတည်းက ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ comment တွေဖတ်ပြီး တစ်ခုခုပြောချင်ပေမဲ့ ဘယ်လို​ပြောရမှန်း ဘယ်ကစပြောရမှန်း မသိ ဖြစ်နေတာကြာပြီ။ အခု ကျွန်တော့် အကြောင်းနဲ့ အမြင်ကိုပဲ ပြောပါမယ်။
Reply	Tohon permalink	13 May 2012 1:56 pm	• ကျွန်တော်ပြောချင်ပေမဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ အချက်တချို့ပါ။
Reply	oscar permalink	5 September 2012 1:06 am	right!!
zinmin permalink	9 January 2013 8:48 pm	ထောက်ခံတယ် ဒါနဲ့ကိုTohon ရဲ့ချစ်သူ ကချောလားညီမက သာမန် boy+girl ဇာတ်လမ်းတွေကို မကြိုက်ဘူး အချိန်ရရင် နဲနဲ အကိုတို့ရဲ့ love story လေးပြောပြပါလား
Luke permalink	28 October 2013 2:21 pm	အကို Tohon ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ လက်ခံထားတဲ့ ဘဝလေးက စိတ်အေးချမ်းလှပါတယ်။လူတွေက ယောက်ျားချင်းကြိုက်ရင်ကို အခြောက်လို့ပဲထင်နေကြတာ။တကယ်တော့ခြောက်ခြောက်မခြောက်ခြောက် အချစ်ဟာအချစ်ပါဘဲ။ယောက်ျားချင်းကြိုက်တော့ သူတို့အလုပ်ပျက်အကိုင်ပျက်ဖြစ်နေလို့လားဗျ။လူလူချင်းကြိုက်တာဘဲဗျာ သူတို့က ဝေဖန်နေရင်ကိုကျေနပ်နေကြတာ သူများကိုဝေဖန်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညံ့လှပြီဆိုတာမသိကြဘူး။အကို Tohon ပြောသလိုဘဲ ၁၀၀မှာ၁၀၀လုံး မိန်းမ လိုဝတ်စား မိန်မစိတ်ပေါက်နေတာမဟုတ်ဘူး ။လူ့ဘဝကတိုလွန်းပါတယ် အသက်ရှင်တုန်း ကိုယ့်ဘဝကို ပုံဖော်နိုင်တာဘဲ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ဘဲနေမှာပေါ့ လူတိုင်းကိုအနှောက်အယှက်ပေးနေတာမှမဟုတ်တာ။တကယ်တန်းတော့ ဘာအမျိုးအစားကိုဘဲကြိုက်ကြိုက် အဓိက ကအချစ်ပါဘဲ ချစ်နေပြီး တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်နားလည်ပေးနေရင် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းနေမှာပါ(ဘယ်သူဘာပြောပြောပေါ့)အဲ့လိုအချစ်တွေနဲ့ပေါင်းဖက်ထားတဲ့Homo တွေကိုအမြဲအားပေးပါတယ်လက်ခံပါတယ် ဘာလို့လဲဆို သူလဲကိုယ်လိုအသွေးအသားနဲ့လူသားပါဘဲ မိန်းမလိုဝတ်ထားလဲကိစ္စမရှိဘူ သူတို့ကိုလဲဘယ်လိုမှမမုန်းဘူး သူကသူ့ဘဝကိုအဲ့လိုလေးအေးချမ်းအောင်ဖန်သီးထားတာလေ လူကိုလူလို့မြင်ရင်စိတ်မရုတ်ရပါဘူး။ဒါပင်မဲ့ ကိုယ်စိတ်အာသာပြေဖို့အတွက်နဲ့အခွင့်အရေယူ မဒိန်းကျင့်တဲ့သူတွေကိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလက်မခံနှိင်ပါဘူး ညီအကိုမောင်နှမချင်း ကိုချင်းမစာကြဘူး
Luna Nwe permalink	24 May 2012 7:58 pm	ကို Tohon ပြောတာ သဘောအကျဆုံးပဲ…
Reply	Shwe Nattharlay permalink	7 October 2012 6:54 pm	ပြောဆိုဆွေးနွေးသွားတာအရမ်းကောင်းပါတယ်……….အရမ်းကောင်းပါတယ်……….
Reply	Tagoo permalink	23 June 2013 5:55 pm	Tohom ပြောတာကို လက်ခံတယ်။
Reply	brown tun permalink	15 August 2013 2:02 pm	ကေါင်းပါတယ် အကို
Reply	Tohon permalink	29 December 2013 11:14 pm	အကြောင်းပြန်တာနောက်ကျတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ ဆရာအတ္တကျော်ဘလော့ကို မရောက်တာ ကြာပါပြီ။ ရေးထားတဲ့ comment မှာ သိသာနိုင်တာတွေကို ယေဘုယျ လုပ်ထားတာကလွဲရင် အဖြစ်မှန်ပါပဲ။ အချက်ကျကျ ပြောရမယ်ဆိုရင် အခုချိန်အထိ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖွင့်ပြောဖြစ်တာသေး မဟုတ်တဲ့အတွက် မှန်နေတုန်းပါပဲ။ ကျွန်တော်က loner တစ်ယောက်ဆိုတော့ ကျွန်တော့်အတွက် sex အပိုင်းကလွဲရင် gay ဟုတ်တာမဟုတ်တာ သက်ရောက်မှု သိပ်မရှိထင်ပါတယ်။ ချစ်တဲ့သူမတွေ့ဘူးဆိုရင် အခြေအနေအရ ပြောဖြစ်ချင်မှ ပြောဖြစ်ပါမယ်။ comment ရေးကတည်းက အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘလော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အကိုတို့ site မှာ ဖော်ပြဖို့ ကန့်ကွက်စရာ မရှိပါဘူး။ အရင်ရေးထားတာ ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ ဖြည့်ပြောချင်တာတွေ ရှိပါတယ်။
Reply	Adam permalink	26 January 2014 4:43 pm	ဟုတ်ကဲ့…
Reply	Luhan permalink	6 July 2014 11:38 am	ko Tohon နဲ့အရမ်းခင်ချငါတယ် emailပေးပါလားခင်ဗျာ
Reply	Luna permalink	24 May 2012 8:30 pm	I went toahomosexual school… well, in our little society, everybody is okay with the lesbian thing… some girls are dying to date the popular tomboys at the school… i used to bealesbian… maybe i enjoyed being in love with someone…
Reply	Prince Takashi Sako permalink	2 June 2012 6:57 pm	mom said nothing different i am gay or not . she said it is love and its beautiful too but she just don’t know how to face with my boyfriend :D
Reply	zinmin permalink	9 January 2013 8:56 pm	Oh really ! ငါ လဲ မင်းလို ဖြစ်ချင်တယ်
Reply	မီး နတ် permalink	11 June 2012 11:02 am	မပြစ်မှားမကျူးလွန်သင့်သော ကာမေသုကံမြောက်သည် မိန်းမများ
Reply	မီး နတ် permalink	11 June 2012 11:09 am	အထက်ပါ မိန်းမတွေကို ကံသုံးပါး တစ်ပါးပါးနဲ့ပစ်မှားရင် နောင်ဘဝ ခြောက်မဟေ့ … ဒါပဲ …..
စဉ်းစား ဆင်ခြင် သုံးသပ် …. ဘယ်အမ နဲ့ ကိုယ်လွတ်အောင်ရုန်းမလဲ :)
Reply	မီး နတ် permalink	11 June 2012 9:13 pm	ကျွန်တော်ရေးတဲ့ comment ကိုဖျက်လိုက်သလားလို့ … :)
Reply	gujghi permalink	22 July 2012 2:14 pm	ဒီစာကို ဖတ်ရတာတော့ ကြာပါပြီ။ တစ်ခုခု ပြောချင်ပေမယ့် ဘာပြောရမလဲ မသိဘူး ဖြစ်နေလို့။ ပြန်တွေးကြည့်လိုက်တော့ သူတို့ကို လွတ်လပ်ခွင့် ပေးလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ တကယ်တော့ သူတို့ရဲ့ ဘ၀တွေက လူချင်းတူတောင်မှ လမ်းမှာ တွေ့ရင် သူများ နှာခေါင်းရှုံ့တာကို ခံနေရတဲ့သူတွေပါ။ အခြောက်တွေ များလာလို့လည်း ကျွန်တော်တို့တွေ နစ်နာစရာ မရှိသလို တိုးတက်စရာလည်း မရှိပါဘူး။ တကယ့် လက်တွေ့မှာ မြင့်မြတ်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ ယောင်္ကျားတွေက အဲဒီနိမ့်ကျတဲ့ အခြောက်တွေမှာ ခြူစား မြှုစားနေတာတွေ အများကြီးပါဗျာ။ အားလုံး ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ် ကျေနပ်ရင် အရာရာ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
Reply	oscar permalink	5 September 2012 1:10 am	i agree that. thanks!
Reply	malin permalink	5 September 2012 12:13 am	ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း လိင်တူကြိုက်ပါတယ် ဒါအပြစ်လို့မထင်ပါဘူး
Reply	တေဇညို permalink	8 September 2012 12:47 am	ဆရာ….ဆီကို ဘယ်လို မေးလ်ပို့ရမလဲခင်ဗျာ…..
Reply	zinmin permalink	9 January 2013 8:40 pm	လူ လူချင်းချစ် တာ ရွံစရာမဟုတ်ပါဘူး ငါ ကတော့ မိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်ပေမဲယောက်ကျား ချင်း ချစ် တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရတာပိုကြိုက်တယ်အားပေးတယ်
Reply	Innocence permalink	1 February 2013 11:37 am	ကို Tohon ပြောသွားတာသဘောကျပါတယ်ဗျာ …ကျနော်လည်းယောက်ျားစစ်စစ်တယောက်ပါ
မိန်းမတယောက်ဖြစ်ချင်စိတ်လည်းမရှိပါဘူး ဒါပေမယ့် ယောက်ျားလေးတွေကိုပဲရင်ခုန်ပါတယ် မိန်းကလေးတွေကိုတော့ အမ ညီမ ထက်မပိုပါဘူး
ဆရာပြောသလိုလူတွေလက်ခံလာရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ ဒါပေမယ့်ကျနော်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုသိပ်ဂရုမစိုက်ပါဘူး သူတို့လှုပ်တိုင်း ကိုယ် လှုပ်ရင်ဘာမှကိုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး
TO zinmin – love story သိပ်သိချင်သပဆိုရင် nightingale91092@gmail.com ကို add လိုက်ပါ :D
Reply	Luke permalink	28 October 2013 2:31 pm	အကိုInnocence ရဲ့ခံယူချက်တွေက ကျွန်တော်နဲ့တူတယ်ဗျ။
Reply	zin min permalink	1 May 2013 11:47 am	မြန်မာတွေက တော်တော် အပြစ်တင်တတ်ကြတယ်။ လိင်တူချစ်သူတွေလည်း ဘာဖြစ်လဲ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်တာ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတူတွေ တူမတွေ အရွယ်ရောက်လို့ gay ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင် အားပေးလိုက်မယ် သူတို့စိတ်နဲ့ သူတို့ပဲလေ။
Reply	Moe Myint Aung permalink	28 June 2013 11:49 am	ကျွှန်တော်အတွက်တော့ အသိတွေအများကြီး ရသွားပါတယ်… ဒီပို့စ်လေးကိုတင်တဲ့ သူကိုရော ကွန်မန့်ပေးထားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ….. ကိုယ့်အကြောင့်ကိုတော့ ခုချိန်ထိ ပြောမပြနိုင်တာကတော့ ကျွှန်တော့်ရဲ့ အားနက်ချက်မို့ ခွင့်လွတ်ပေးစေလိုပါတယ် ( ပြောနိုင်တာတခုကတော့ ကိုယ့်ကြောင့် အခြားသူကိုလုံးဝ မထိခိုက်စေရဘူးဆိုတာပါ )
Reply	ကိုလုံးထောင် permalink	22 October 2013 5:53 am	ကျွန်တော် အနေနဲ့ ပြောချင်တာလေးက တော့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အသိ လေးအကြောင်း ကိုမျှဝေပေး ကြတဲ့ အကိုတွေ အမတွေ ရင်ထဲးမှာ တရားကိန်းနေတာကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ အာရပါးရကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့အတွက် ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိနေကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သဘော်ပေါက်နားလည်ခဲ့ရပါပြိ
အားပေးကြတဲ့ အကြိမ်ရေ	265,379 Top Clicksnookycontent.wordpress.co…မူပိုင်ခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍…	သည်ဘလော့(ဂ်)ပေါ်က စာတွေကို လူပုဂ္ဂိုလ် “တစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့” မိမိတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများထံ လက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ဝေတာမျိုး၊ ကူးယူ ဖော်ပြတာမျိုး၊ Facebook, Twitter စတဲ့ ကွန်ရက်တွေကတစ်ဆင့် မျှဝေတာမျိုးကို မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ အဲလို ဖြန့်ဝေတဲ့အခါ ရေးသူအမည်၊ မူရင်းကို ဖော်ပြခဲ့တဲ့ စာအုပ်၊ စာနယ်ဇင်းအမည်၊ သည်ဘလော့(ဂ်)ရဲ့ လင့်(ခ်)တို့ကို ဖော်ပြပေးသင့်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ရေးသူ အမည်ကို မလွဲမသွေ ဖော်ပြပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေလား။